सिके राउतको गाँउमा ३ बजेसम्म पनि भोट दिन कोहि आएनन्
राजविराज । सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाँउपालिकाको आधारभूत प्राथामिक विद्यालय केन्द्रमा अपरान्ह ३ बजेसम्म एउटा पनि मत खसेको छैन ।
बिहीबार देशका ४५ जिल्लामा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि उत्साहजनक मतदान जारी रहेपनि यस मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न कोहि मतदाता नआएको सप्तरीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिशचन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिएका छन् । सो केन्द्रमा ९ सय जना मतदाता रहेका छन् ।
कुनै मतदाता नआए पनि कर्मचारी ५ बजेसम्म कुरेर बस्ने ढुंगानाले जानकरी दिएका छन् ।
मधेस छुट्टै देश हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतको गाउँ रहेको महादेवामा दलका प्रतिनिधि र मतदाता आउँ डराइरहेको देखिएको छ । आजै राउतलाई चुनावविरोधी गतिविधिमा लागेको भन्दै प्रहरीले जनकपुरबाट पक्राउ गरिसकेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन आयोगले थाल्यो गृहकार्य
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले अब हुने आवधिक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भनी तयारीका लागि गृहकार्यमा जुटेको छ । त्यसका लागि कुन–कुन मुलुकमा के–कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको
आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने कोइरालाको भविष्यवाणी !
चितवन । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले आउँदो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान समारोह
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन, ट्रम्पको अग्निपरीक्षा
काठमाडौँ । संयुक्तराज्य अमेरिकामा यही नोभेम्बर ६ अर्थात् कात्तिक ६ गते मङ्गलबारका दिन मध्यावधि चुनाव हुँदैछ । यो चुनाव अमेरिकी प्रतिनिधिसभा, माथिल्लो सदन सिनेट र राज्यका गभर्नरका निम्ति हुन लागेको
म्यानमार । बहुदलीय व्यवस्था रहेको म्यानमारको संसद्का लागि शनिबार निर्वाचन भएको छ । स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान सुरु भएको निर्वाचनका लागि झण्डै नौ लाख मतदाता रहेको जनाइएको छ । निर्वाचनमा विभिन्न २४